Muwaaddiniinta shalay kal iyo laab u taageeray Farmaajo…. - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muwaaddiniinta shalay kal iyo laab u taageeray Farmaajo….
Muwaaddiniinta shalay kal iyo laab u taageeray dhaqanka maamulka Farmaajo ee keli-talisnimada iyo ixtiraam darrida sharciga ay ka muuqato:
1- In la xiro, la caburiyo mucaaradka, dadka wax dhaliila, warbaahinta.
2- In la tuuro wasiiro muujiyay aragti ka duwan tan Madaxweynaha iyo RW weliba si ixtiraam darro ah.
3- In la tuuro Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo firfircooni muujiyay.
4- In sharci darro xilka looga xayuubiyay, laguna qasbay is casilaad Guddoomiye baarlamaan oo ka madax banaanaa madaxweynaha.
5- In qof aan khibrad garsoor lahayn loo dhiibay xilkii Guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Muwaaddiniintaas oo ku heesayay waa Libaax Kheyre, Libaax Farmaajo, marka hay’adihii la xisaabtami lahaa, dowladnimada udub dhexaad u ahaa ay Villa Soomaaliya hoos geeyeen…
Hadda oo uu maamulka Farmaajo RW Itoobiya heshiis ganacsi iyo mid dhaqaale la saxiixday, ma ka rumeysan karnaa in ay ka qeylinayaan khiyaano qaran iyo halis soo socota. Adigaa taageersanaa in hal meel dowladnimada ku uruurto xisaabtan la’aan!
Inta dhifka ah ee taageersan kelitalisnimada waxay maalmahaan oo dhan ka qeylinayeen BBC oo si sax ah uga hadashay hadalka Abiy Ahmed, qaarbaa sheegay in ay olole ku billaabeen BBC si loo cabburiyo.
In kastoo welwelka shacabka uu gar yahay, heshiiska Itoobiya lala galay waxba kuma jabna, balse waa faa’ido haddii dhabbe sax ah lagu fuliyo, oo baarlammaan ka madax bannaan xukuumadda, garsoor aan Villa Somalia ka amar qaadan,
Mar haddii aad shalay taageertay in awoodaha kale ee dowladnimo la maquuniyo sida:
1- Golaha Shacabka
4- Shacabka, mucaarad iyo dhaliile
Maanta sabab aad takrifal awoodeed uga qeyliso meesha kuma jirto, dhaliilna kuuma furna.
La soco dadka maamulka dowladeed ee casriga ah alifay, sabab ay garsoor madax bannaan, baarlamaan, warbaahin iyo xurriyadda hadalka ugu xeendaabeen awoodda golaha fulinta iyo madaxweynaha ayaa meesha ku jirta! Ma ila dareemaysaa hadda? Waxaa laga carayayay in hal qof uu helo “absolute power” awood buuxda oo aan cid kale xisaabin karin. Awoodda qofka way qaribtaa!
Baarlamaanka ayaa maamulka hortaagan ayay ahayd eeddu. Baarlamaan in uu maamulka hortaagnaado waa shaqadiisa si aadan uga welwelin takrifalka madaxweynaha iyo xukuumadda!
Heshiiska laga qeylinayo, waxaa ka daran dowladnimada la qaribayo!
Ayadoo sidaas ah weli ha noolaato!